Ihowuliseyili JOYBOLD JB516B Brushless Motor Max 30km Max Load 120 Kg Led Light Electric Electric Scooter Manufacturer and Supporter | Jinbang
Ukusebenza ngokugqwesileyo-Esi scooter sombane sixhotyiswe nge-350 watt motor, ngesantya esiphezulu se-25km / h kunye nokuhamba nge-30km, enokuthi ibambe ngokulula i-15% yeethambeka.
Inqanaba elinye lokusonga uyilo-isikuta sombane sinokusongwa ngokukhawuleza ngokudlula ngesandla ngomzuzwana o-1. Xa sisongiwe, isithuthuthu sinokuqhutywa ngesandla esinye, sisenze ukuba sibe liqabane elifanelekileyo labakhweli.
Ikhuselekile kwaye ibamba-brake izinzile kwaye ithembekile. Inkqubo yeebhuleki ezigqwesileyo yenza iziqhoboshi ziphendule ngokukhawuleza kwaye ziphucule ukhuseleko ngexesha lokusetyenziswa. I-absorber yokutshatyalaliswa kwangaphambili inika umqhubi ngokukhululeka okukhulu. Inkqubo yokusebenza kwebhuleki yesandla ephezulu ikwanayo nomsebenzi wokubuyisa amandla we-EBS, kwaye i-fender yangasemva nayo inebrake function. Amavili angaphambili axhotyiswe ngenkqubo yokufunxa, enokwenza ukuqhuba kuzinze.
Ukukhwela ngokulula-indlela entsha yokuhamba ngenqanawa: Yiza uzame indlela entsha yokukhwela isithuthuthu! Cinezela nje ezantsi ukuqala.
Eyahlukileyo kwaye isebenziseka lula-esi sikuta sombane sikhulileyo sixhotyiswe ngeenyawo ezinyawo ezingashukumiyo (ezinokuxhasa iinyawo ezinkulu), izibane zangaphambili ukuqinisekisa ukukhwela ebusuku ngokukhuselekileyo, kunye nomboniso ocacileyo we-LED ukwenza lula ukukhwela.
Ibhetri: Iselfowuni ye-LG 18650 * 30, 7.8 Ah, 36 V
Imoto: I-Brushless Motor 350W (iMax 700W)
Itshaja: Igalelo le-AC / 100-240 V, Iziphumo ze-42V, 1.7A
Waqhekeza: Inkqubo ezimbini zokuQhekeza (Ngaphambili i-Electronic Brake kunye neBrake Disc Disc Brake)
Isondo: Inyosi yobusi iTire, 8.5 ″
Ukukhanya: Ngaphambili i-K yangasemva uphawu lwe-LED ukukhanya (ngokusekwe kwisicelo semoto)
Izatifikethi: I-CE (EN17128), i-EKFV, i-RoHs, i-UN38.3, i-MSDS / yoVavanyo loThutho loMoya nolwandle,: Ngaba kungabhaliswa nge-ABE
Ukupakisha: Ibhokisi yokuThengisa (123 * 21 * 45cm / GW 18kg / NW: 14.5kg), 1 iiPC / CTN
Isikhongozelo kulayishwaIifayile ezingama-230 / 20GP, ii-620 ii-PC / 40HQ
Izimvo zoQikelelo maxabiso Umhla wama-23 / Okthobha / 20
1. Ikowuteshini yethu isekwe kwi-USD: RMB = 1: 7, nje ukuba inqanaba lotshintshiselwano luguqukile ngaphezulu kwe-3%, ixabiso liya kuxhomekeka.
2. Nayiphi na imibuzo pls uqhakamshelane nathi nge-imeyile okanye ngomnxeba !!! Eyona nkonzo yethu ibalaseleyo kukuma kuwe !!!
Egqithileyo Isikuta sombane JB525
Okulandelayo: Isikuta sombane JB520
Q1. Yintoni imiqathango yakho yentlawulo?
A: T / T-30% njengedipozithi, kunye ne-70% ngaphambi kokuziswa. Siza kukubonisa iifoto zeemveliso kunye neephakeji ngaphambi kokuba uhlawule imali eseleyo.
Umbuzo Athini amagama akho okuhambisa?
A: EXW, FOB, Lwemipu, CIF, DDU njl
Umbuzo. Njani ngexesha phambili?
A: Ngokubanzi, kuya kuthatha iintsuku ezili-10 ukuya kwezi-25 emva kokufumana intlawulo yakho kwangaphambili. Ixesha lokuhambisa elithile lixhomekeke kwizinto kunye nobungakanani beodolo yakho.
Umbuzo Ndingafumana iisampulu zovavanyo?
A: Ewe, sinokubonelela ngeesampulu zokujonga umgangatho kunye novavanyo lweemarike, kodwa abathengi kufuneka bahlawule iindleko zesampulu kunye neendleko zekhuriya.
Umbuzo 5. Ngaba uvavanya zonke iimpahla zakho ngaphambi kokuziswa?
A: Ewe, sinovavanyo lwe-100% ngaphambi kokuziswa
Q6. Ngaba kunokwenzeka ukuba uthenge izixhobo ezizezinye (iiyunithi zolawulo, imoto / ivili njlnjl) kuwe ngqo?
A: Ewe, unokuthenga izinto ezingasasebenziyo kuthi ngqo.
Umbuzo 7. Ngaba ungayenza ilogo okanye uphawu lwethu kwizithuthuthu?
A: Ewe, i-OEM yamkelekile. MOQ yi 300pcs ngexesha elinye. Kuya kuthatha malunga neentsuku ezili-10-15 ukugqiba isampulu.
I-Q8: Uyenza njani ishishini lethu ixesha elide kunye nobudlelwane obuhle?
A: Siyabahlonipha bonke abathengi njengomhlobo wethu kwaye ngokunyanisekileyo senza ushishino kwaye senza ubuhlobo nabo, nokuba bavela phi na. ”
Isikuta sombane JB516C